समाजवादीका उमेदवार गुरुङले कडा शब्दमा भने -“सिमा मिच्दा नबोल्ने नेकपा अध्यक्षहरु नामर्द” – Sanghiya Online
समाजवादीका उमेदवार गुरुङले कडा शब्दमा भने -“सिमा मिच्दा नबोल्ने नेकपा अध्यक्षहरु नामर्द”
Posted on : November 18, 2019 - No Comment
मंसिर १४ गते कास्की क्षेत्र नं. २ मा हुनगइरहेको प्रतिनीधिसभाको उपनिर्वाचनको चुनावी प्रचार प्रसार तिब्र भइरहेको छ। समाजवादी पार्टीका उमेदवार ईञ्जिनियर धर्मराज गुरुङलाई मतदानका लागि आग्रह गर्दै आइतबार पोखरा १५ मा घरदैलो र टोल टोलमा चुनावी कोणसभाहरु सम्पन्न गरिएको छ।
कालिका मन्दिर चौतारोमा आयोजित कार्यक्रममा बयोबृद्धा ८३ वर्षिया चिजकुमारी गुरुङले विजयीको शुभकामनासहित टिका, फूलमाला र खादा लगाएर प्रारम्भ गरिएको घरदैलो कार्यक्रम बिरेन्द्रचोक, राममन्दिर, पेन्सन क्याम्प, घलेचोक, खरबारी, नयाँगाउ, हरियोखर्क, बन विज्ञान क्याम्पस, प्रतिभा मार्ग, लक्ष्मी टोल लगायतको क्षेत्रमा घरदैलो र कोणसभा सम्पन्न गरिएको हो। उमेदवार गुरुङलाई विभिन्न टोलहरुमा आमाहरुले फूलमाला र खादाले स्वागत गर्दै विजयी गराउन आफुहरु जुट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उहाँलाई नयाँगाँउ, सेन्टमेरिज ट्याक्सीचोक, हरियोखर्क, लक्ष्मीटोल लगायतका क्षेत्रका आमाहरुले माला, खादा, फेटा, फुल लगायतले स्वागत सम्मान गरिएको थियो।
यसरी नै कालिका मन्दिर चौतारो, घलेचोक, सेन्टमेरिज ट्याक्सीचोक, हरियोखर्क बनविज्ञान क्याम्पस, वडा नं. १५ को कार्यालय र लक्ष्मीटोलस्थित लक्ष्मी मन्दिरमा चुनावी सभा गरिएको थियो।
कार्यक्रमहरुमा उमेदवार धर्मराज गुरुङले आफ्नो समान कानुन, सुशासन, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि इमान्दारीपुर्वक सेवक बन्ने बताउनुभयो। उहाँले आइतवारको घरदैलो कार्यक्रम समापनका लागि लक्ष्मी मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नु हुदै आफु सेवा गर्न राजनीतिमा क्रियाशील भएको बताउनुभयो। भिजन छैन, योजना, निती केही छैन पैसा कमाउन नेताहरु तल्लिन भएको देख्दा असह्य भएको बताउनुभयो। काण्डै काण्डमा मुलुकलाई डुवाउने, दुर्गतिमा धकेल्ने गरेकोमा सबै नेपालीले राजनीतिक अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म सँग विदेश र यु एनको लामो अनुभव भएकाले मुलुकलाई सिस्टममा सञ्चालन गर्न गराउन आफु प्रतिनीधिसभामा प्रवेशको जरुरत भएको दावी गर्नुभयो। यसै विच उहाँले भन्नुभयो, कालापानीमा सिमा मिचिदा चुप लागेर बस्ने नेकपाका दुई दुई अध्यक्ष नामर्दा भएको आरोप लगाउनुभयो।
यसैविच सिमा मिचिदा सबै नागरिकहरु राज्यकै पहलमा राष्ट्रियताका लागि लड्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अन्य मुलुकको स्वार्थका लागि करिब चार दशक समय बित्यो अनुभव मुलुकका निम्ती लगानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सत्ता हाँक्ने पार्टी मात्रै नभएर देशको सिमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारको भएकाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर आश्चर्य लाग्छ, कालापानीमा सिमा मिचिदा पनि चुप लागेर बस्ने सत्ता हाँक्ने दुई दुई अध्यक्षलाई नामर्दा भएको दावी गर्नुभयो।
समापन कार्यक्रममा सांसद एवम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सहइञ्चार्ज हरिशरण आचार्यले पतिको निधन पश्चात बर्कोमा भोट माग्नु मतदातालाई खेलवाड गर्न खोजिरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो।
वडा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक तथा पार्टी अध्यक्ष जसबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तमुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले समेत धर्मराजलाई भोट किन भन्दै विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो।
यसरी विभिन्न कोणसभाहरुमा उमेदवार धर्मराज गुरुङ, हुमबहादुर गुरुङ, नेत्र चापागाई, रेशम सापकोटा, डिवी गुरुङ, क्या. नरेश थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राट्रिय कलाकालर तथा पार्टीकी प्रदेश सचिव पार्वती जिसीले चुनावी गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
देउवालाइ कालो झण्डा देखाउने एमाले कार्यकर्ता पक्राउ, राणा शासनजस्तै एमालेको अन्त्य : देउवा
मोरंगमा कांग्रेसको गढ भत्काउदै सबै क्षेत्र, बाम गठबन्धनले गर्यो कब्जा (परिणाम सहित)
किन भए राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उप-प्रधानमन्त्री ?
उपेन्द्रको प्रस्ताब केपी ओलिदवारा ठाडै अस्विकार, ओलीले भने ‘तपाइले भनेको हुदैन”
२ हजार ७ सय १५ जना नेपाली सैनिकमाथि विभागीय कारबाही, यस्तो छ कारण
उपेन्द्र एक्कासि दिल्ली प्रस्थान, पदाधिकारी बैठक नसकी किन गए दिल्ली ? यस्तो छ कारण